Iningi izinjini ukufakwa izimoto namaloli, eyenzelwe operation okuqhubekayo. Ngesikhathi esifanayo, abaklami abahlinzeke ithuba ukulungisa, ngokuvamile akekho ngisho noyedwa, kodwa abaningana. Ngenxa yalesi kukhona ekhethekile ukulungisa osayizi imininingwane. Kodwa manje ngingathanda ukukhuluma mayelana izici injini ikakhulukazi, ukugcinwa futhi usebenza kanjani. Kumayelana 417 m UAZ injini, okuyinto kubhekwa ethandwa kakhulu futhi enza izinto ezihlukahlukene.
Kuyaphawuleka ukuthi i-UAZ izinjini ekhiqizwa ngesikhathi Ulyanovsk futhi Zavolzhsky izitshalo. Uma sikhuluma 417th, lokhu ukukhiqizwa UMP amandla iyunithi. Lo mugqa 4-ka-hlobo carburetor. I uphethiloli yangaphakathi omlilo injini yethulwa ngo-1989 futhi ekhiqizwa esikhathini sethu. Block ikhanda eyenziwe aluminium. Lokhu kwenziwa amandla iyunithi kulula, kodwa ngesikhathi esifanayo kusengozini yokuthi okweqile. Futhi abashayeli abaningi owayephakathi ukukhwela UAZ, wancoma motor 417th. Yena kukhulunywa njengoba injini enamandla futhi ngamandla, futhi isikhathi eside.
Ngaphezu kwalokho, umklamo walo ulula, ngakho 417th maintainable kakhulu, okuyinto ebaluleke kakhulu. Kunoma ikuphi libuyekeza mayelana 417 m UAZ motor omuhle, kodwa lukhulu. Awu, manje ake udlulela phambili.
Engine Imininingwane 417 UAZ
Ngaleso sikhathi, kwavela 417th lungase lubizwe ngokuthi impumelelo. Yathatha indawo esiphelelwe UMZ 414. Lesi sakamuva uye e iminyaka engu-70 sasibhekwa njengophawu lokuthi hhayi okungcono, yini okumelwe ngiyikhulume sokuphela of the 80s, lapho kwakukhona powertrains okuthuthukile. UMP 417 uma kuqhathaniswa valve 414 lase lenyuke, kanye ukuhlunga okusha ngokuphelele emoyeni.
Kuyadingeka neze ukusho ukuthi lonke ukucaciswa kuzinga ehluke ngokuphelele. Okwamanje kutholakala 4 Motor ukuhlela kabusha, ngasinye sazo isetshenziselwe izinjongo ezithile:
417,10 - efakwe UAZ "Patriot" futhi "Hunter". Amandla amandla iyunithi 92 Besebenzisa amahhashi, isebenzisa 76-m uphethiloli;
4175,10 - kusethelwe ku- "iNsephe." Lokhu ukuguqulwa has a 98 hp futhi 92 m uphethiloli;
4178,10 futhi 4178.10-10 - efakwe izimoto eziningi UAZ futhi, eqinisweni, powertrains efanayo.
Umqulu zokusebenza injini - 2.4 amalitha, anoma 92 amalitha. a. at 4 000 rev. / imiz. ukuphila ekumkhonzeni nenjini ezinjalo ezingaba ngu-150 000 km, kodwa umkhuba kungaba kokubili ezinkulu futhi kubonisa ukuthi mancane. Lapha sahlola Ukucaciswa UAZ 417 injini, futhi manje siya phambili.
Mayelana amaphuzu ezibuthakathaka motor
Naphezu enokwethenjelwa, le yangaphakathi omlilo engine has a lot of ubuthakathaka. Njengoba kuphawulwe ngenhla, senziwa aluminium. Inesisindo khilogremu 166 kuphela, engesiyo kakhulu lesi isitshalo ngamandla. Kodwa ngesikhathi esifanayo, kube nenkinga nge okweqile. okushisa ngokweqile kungaholela imifantu e block, ukuhlukumeza die geometry nezinye izinkinga. Isikhathi esining impela zikhona kunyakaza ngesikhathi engenzi lutho ukugijima nangaphansi umthwalo. Kodwa inkinga enkulu kunazo zonke - ukuvela ongqongqoza.
Zonke lezi zinkinga zihlobene nge bafake izingxenye ngazinye, ezifana Cams, amabombo, iziphethu, njll Kwezinye izimo kukhona ukuntuleka yesevisi: .... ukungahambisani isikhathi nesimiso ekushintsheni uwoyela, Isibandisi, njll Konke lokhu kuholela esimweni Ukuwohloka injini. Ekugcineni, kungase jam. Kodwa ngisho noma lokhu kungenzeki, ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa kakhulu ziyancipha. Lokhu injini isici UAZ 417 njengoba kokucindezelwa, ziyakuyela, uyoqala ukudla ibhotela, futhi kudingeka ukulungiswa ezinkulu.
On sokubuyiselwa UMP 417
Kungenye into yokulungisa injini amazwe, lapho cishe zonke izingxenye kufanele oda phesheya, ukuthi uya ngempela eqolo futhi zibiza. Ngokuqondene 417 th, kuba lula kakhulu ukulungisa. Lokhu motor ezifuywayo design elula, okuyinto cishe bonke ochwepheshe ezaziwayo. Nakuba abantu abaningi ungakhathazeki, nje ukuthatha futhi agqoke UAZ amandla amasha iyunithi, kwezinye izimo kunengqondo ukwenza ubudala.
Uma ukwenza umsebenzi wena, uyobe uthathe izingxenye ezingaba ngu-20 kuya ku 000. Endabeni balungisa iziteshi engeza mayelana esilinganayo umsebenzi. Kodwa ngisho nayo, akusiyo ayebiza kangaka uma liqhathaniswa namanye izimoto angaphandle, lapho yangaphakathi omlilo injini ukulungisa izindleko amakhulu ezinkulungwane.
Izibuyekezo Isazi ka UAZ injini 417 (UMZ)
Okokuqala futhi okubaluleke kakhulu, ukuthi zabela abashayeli ochwepheshe, - traction kakhulu. Kodwa okuningi kuncike carburetor. Ngo izinguqulo kakade efakwe umjovo umjovo uhlelo, kodwa manje akusiwona ngazo. Ochwepheshe abaningi batusa kokufaka "Solex". Naye futhi wagxila ukwanda kanye ukugeleza isilinganiso is kakhulu ziyancipha. Kodwa uma eqhathaniswa K121, okuyinto, nakuba ubudala, kodwa isetshenziswa ngokuvamile lokho kwanele. Abaningi stop at K151, kusukela, ngokuvumelana iningi, kungcono UAZ injini carburetor 417. Yeka indawo? Khona-ke kuphuma kuwe.
Ochwepheshe batusa ekushintsheni uwoyela ohlelweni zonke amakhilomitha ayinkulungwane 10. Pour kudingeka mayelana 5.8 amalitha, kuyilapho ungakhohlwa ngohlobo brand ye igrisi. Konke lokhu ulwazi olushiwo bhukwana imfundo.
izinkinga ejwayelekile nezisombululo zabo
injini ngamunye unobuthakathaka nezici ukuthi ahlukile kuye. Kwaba okufanayo nge-m 417. Lokhu motor siphukile, nakuba akuvamile, kodwa unikeza omningi izinkinga kumnikazi. Kujwayele iqala nge-ukuvuza uwoyela. Smudges avele ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, kusukela athuthukile nezimpawu kanye gaskets bonyana batshidze ukwehluleka ohlelweni. Ngokuvamile nginqobe lezi zinkinga olulula. Gaskets nezimpawu baguqulelwa, le sealant ubudala sisuswa futhi ugcwale entsha uma kunesidingo.
Ngokuvamile, cishe zonke izinkinga 417-m axhunyiwe nge igrisi. Lokho izinga liphezulu kakhulu noma eliphansi kakhulu, amafutha ephuma avuzayo noma combusted ekamelweni. Zonke lezi zinkinga zingaxazululwa, kodwa kubalulekile ukuba senze kanjalo ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ngokushesha injini ukulungisa UAZ 417 zizokwenziwa, isithombe ongawabona kulesi sihloko, injini bukhoma ngaphezulu.
bafake okwandisiwe yangaphakathi omlilo injini
Gqoka - yezinkinga kunazo ukuphokophela, okuyinto cishe lutho ukwenzani ukuklanywa amandla iyunithi. Isihluthulelo esiyinhloko e bafake yanda, - ukhwaliti ongaphakeme igrisi noma isamba enganele. Yiqiniso, uma uma musa ukushintsha uwoyela ngemva ayizinkulungwane 10 amakhilomitha, futhi ukukwenza ngaso 15, akukho lutho olubi kuzokwenzeka. Kodwa uma wenza kanjalo njalo futhi ukuqapha ezingeni, ugcwalise igrisi ashibhe imiphumela kuyoba udabuka kakhulu.
Isikhathi esining impela kwenzeka ukuthi ukushiyeka okuncane amandla iyunithi liba kulungiswe enkulu. Yingakho, kunokuba umshayeli iqala ukuxazulula inkinga, ngaphansi Kuyoba izindleko ukulungiswa.
Izikhungo injini izinhlelo
Kumele baqonde ukuthi injini yemoto idinga ukugcinwa gqwa. Lolu shintsho uwoyela izakhi lemifanekiso, ukufakwa inhlansi plugs entsha, esikhundleni rollers nebhande noma isikhathi uchungechunge. Konke lokhu kumele kwenziwe ukuqinisekisa ukuthi injini yakho izinto zihambe ngokushelela isikhathi eside. Uma kwakukhona izimfanelo lokuqala ukukhanda, kubalulekile ukuthatha isinyathelo ngokushesha ngangokunokwenzeka. Sekukonke kunezigaba ezintathu yokutakula 417th:
ukulungisa emkhakheni - isilinganiso yesikhashana, okuyinto sathathwa ukuze ufike endaweni oya kuyo;
ukulungisa abakhethayo (esinqunyiwe) - kuhilela kwazo injini kanye nezixazululo izingxenye;
ukulungisa - ephelele yokutakula injini kungakhathaliseki isimo sayo. Lena inqubo sasivumela isikhathi esiningi okudinga semali ulwazi kanye nesineke.
Abashayeli abaningi efakwe injini 417 UAZ - injector. Electronic fuel injection uhlelo phuca imoto carburetor amaphutha. Uma kungekho isifiso sokwenza ushintsho, kungenzeka ukubeka uhlelo ku 4213 kanye 4216, okuyinto kuphakama ngokuphelele ngokungalungisi. Into nje udinga ukwenza, ngakho-ke i-firmware Samandla.
Esikhundleni 417-th kuya komunye motor
abashayeli abaningi bacabanga ngalo. Eqinisweni, ukwenza inqubo enjalo ngokuvamile kudingeka uma kwenzeka ukuthi 417th is ngokuphelele igugile inhlokodolobha ke ayisekho kunengqondo. Kulokhu, ungafaka injini ezahlukene, kunokwethenjelwa futhi ashibhile. Lezi kumele sifake ekhatsi loku ZMZ-402. He kubhekwa by abashayeli abaningi abaye babhekana nazo, ithembeke ngaphezu UMP, futhi ezishibhile ukuze silondoloze. Ngaphezu kwalokho ukuthola bukhoma 402-th kuba lula kakhulu ngentengo sincane, kunokuba 417th, futhi lokhu a plus elikhulu.
Yiqiniso, abaningi izozama esikhundleni kuphela uma kuyazuzisa ngokwezimali. Yingakho kunconywa ukubeka injini ZMZ-402. Ehamba nge sibuyekeze kangako noma abangafundile nhlobo. Zonke obandayo babe endaweni yayo, ngakho izindleko kuyoba esincane. Abanye abashayeli efakwe UAZ yakho izinjini amazwe kusukela "Toyota" nezinye izimoto. Ngokuvamile ibekwe udizili. Yiqiniso, konke okuhle, uzizwa esishintshile ngokuphelele, kodwa izindleko akuyona injabulo ezishibhile, ngoba kulesakhiwo ilethe izinguquko.
Ngakho sasiyihlanganisa ezibekiweko eyisisekelo kanye izici injini 417 kwi UAZ. Bangaki amahhashi ihlinzeka iyunithi amandla? Uma the version zakudala, bese 92 amalitha. a. Lokhu kuvame zingaphezu kokwaneleyo. Kodwa amandla ngezithukuthuku izinguquko ezithile kungandisa kancane. Kuwufanele ukukwenza noma cha, kwaba yilowo nalowo ngenxa yena uyazinqumela.
Ngokuvamile, i-417th yayingase ibizwe ngokuthi yimpumelelo kakhulu indalo Ulyanovsk isitshalo. It is hhayi nje athuthukile ukulungiswa lokhu injini, okuyinto baye bathola isicelo ebanzi esikhathini esizayo hhayi kuphela izimoto UAZ, kodwa futhi phezu ukuthi "iNsephe." Kukhona le injini sintula. Ezinye zazo zingaxazululwa emkhakheni, eminye idinga kokungenela okhokhelwayo. Kodwa ngendlela, lokhu injini kuletha ezingavamile kakhulu, ngakho-ke kungenziwa ngokuthi okuthembekile. Enye into ukuthi umthombo amakhilomitha angu-150 000 - akusiyo kangaka. Ngingathanda ukubona sibalo kancane ephakeme, okungenani eziyinkulungwane 250. Nokho, maqondana nesondlo ngokucophelela kanye nokusebenza mnene ingaqalisa 417 futhi kunangendlela nomkhiqizi ebhaliwe.
Ubudlelwano kwemisebenzi kanye nokukhuphuka kwamanani ezimpahla
Uma uwayehlalise walahlekelwa ekhaya into, ukuthi ungathola kanjani-ke: amathiphu
Kancane isimo bayazi (ikhoma uphapheme): Izimpawu kanye Ukwelashwa Izindlela
Ukukhetha isondo "Ensimini"
Kuyini umusi? izinhlobo umusi
Yini usimende kangcono? Ukuqhathanisa izinto ezithandwayo ezivela abakhiqizi ezahlukene